MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: ရွှေမန်း နောက်မီး လင်းနေပြီ အပိုင်း (၁) + အပိုင်း(၂) နိဂုံးပိုင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဆိုသော သူရ ဦးရွှေမန်း၏ တရာဝင် လင်ခန်းမြောက် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့သူမှာ မြန်မာ့ စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်း အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (ဦးစာဖတ်)နေသူ ဖြစ်လေသည်။ အဆိုပါ တရားဝင် လင်ကြီးမှ သူရဦးရွှေမန်းအား တိုက်ရိုက် နုတ်မိန့်တာဝန်ပေးချက်အရ လက်၇ှိ မလိပ်တပတ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဇာတ်ခုံ၏ မီးရောင်အောက်တွင် ဦးရွှေမန်းမှာ ကပြနေရလေ၏။
ခုံပျံကျော်လွှားသိုင်းသမားကဲ့သို့ ဇာတ်ကြောင်းအစအား ပြောနေရပါမူ ရှည်လွန်းတော့မည် စာရေးသူ ပြောလိုသော အကြောင်းအား တိုက်၇ိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ခုတ်ပိုင်း ဆစ်တောက်ပြရပါက မို၍ မြင်သာပေမည်။
မြန်မာ့ အနာဂတ် ရှေးရေးအတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ ၀င်လုပ်လာသော ဇာတ်ကွက်ကြီးတခုမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှ တရုတ်ပြည် ကူမင်းသို့ ထိုးယိုပေါက် ချက်ခြင်းရောက်နိုင်သော ရထားလမ်းကိစ္စသည် အန္တရယ် အတော်ပင် ကြီးမားကြောင်း မြန်မာ့အရေးလေ့လာနေသူ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနဆိုင်ရာ သုတေသနမှူး မစ္စတာ ဂရက်ဟီဗဲလ်က ထုတ်ပြောလာသည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းထောင်ပေါင်း ၂၀ ခန့် ကုန်ကျမည်ဖြစ်သော မိုင်ပေါင်း ၈၀၀ ခန့် ရှည်လျားသည့် အမြန်နုံန်းမြင့် ကျောက်ဖြူကူမင်း ရထားလမ်း စီမံကိန်းအား စစ်အာဏာရှင်တို့ခေတ်ကပင် စိတ်ကူးကြံဆကာ တရုတ်ပြည်ေ၇ွှလီ ဟော်တယ်တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အနားယူသွားသူ ဒုတိယသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးမှ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား လက်မှတ်ထိုးကာ နောက်ဆုံးသဘောတူညီမှု လုပ်ခဲ့လေ၏။
တရုတ်တို့မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် တခန်းတနားကျင်းပသွားသော ပီကင်း ကွန်မြူနစ် ပေါ်လစ်ဗျူရို အစည်းဝေး၏ ဆုံဖြတ်ချက် မူအရ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဓရာ ဒေသ ပိုင်စိုးရေး စီမံကိန်းကြီးမှ ရည်မှန်းထားချက်များအား အဓိက အကောင်ထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရန် မဟာဗျူဟာ၏ အတွင်းကျဆုံးသော အကြောင်းရာမှာ အဆိုပါ ဒေသအတွင်းသို့ မိမိတို့၏ စစ်အင်အား နှင့် စီပွါးရေး ဆိုင်ရာ ချဲ့ထွင် ပိုင်စိုးမှုအတွက် ထောက်ပံရေး လမ်းကြောင်းသည် ကူမင်းမြို့မှ မြန်မာပြည်အား တံစို့ထိုးကာ ဖေါက်ထွက်ဝင်ရောက်သွားနိုင်သော အိန္ဒိယ သမုဒ္ဓရာသို့ ဗျူဟာမြောက် လမ်းကြောင်းကြီး ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်သို့ အလည်ပတ်ရောက်ရှိလာသော တရုတ်ပြည် သမ္မတ၏ စိတ်ကူးအိမ်မက်အား အကောင်ထည်ဖေါ်ရန် မြန်မာ လူရမ်းကား အာဏာရှင်မှ ကတိက၀တ် ကနဦး ရယူသွားသော ကိစ္စဖြစ်လေသည်။
အကြောင်းမှာ…တရုတ်တို့၏ စစ်ရေးနှင့် စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ သေနကဗျူဟာမှ ထွက်ပေါ်လာသော အိန္ဒိယ သမုဒ္ဓရာ ဒေသ လွှမ်းမိုးရေး ဗျူဟာသည် တရုတ်ပြည်မှ ကနဦး စဉ်းစားချက်များအား နက်ရိုင်းစွာ ပြောင်းလဲ ရှာဖွေရာမှ မြန်မာပြည်သည် တရုတ်တို့အတွက် အဓိက ကျလွန်းနေကြာင်း ဟောင်ကောင် စီးပွါးရေးဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဒေါက် ရမ်ရှန်လီက မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။ တရုတ်ပြည်၏ အနာဂတ် အင်အားချဲ့ထွင်မှုအတွက် ရေတပ်အင်အား တိုးချဲတည်ဆောက် ၀န်ဆောင် မှုအပိုင်းများအရ တရုတ်ပြည်ရေတပ် အခြေစိုက်ရာ ဈာန်ဂျင်း ဆိပ်ကမ်းမှ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဓရာဒေသသို့ ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ရန်အတွက် ခရီးမိုင် ထောင်ပေါင်းများစွာ နှင့် ဗီယက်နမ် တောင်ပိုင်းမှ စကာ အနောက် ဘင်္ဂလား ဒေသထိသို့ အမေရိကန်အပါဝင် အနောက်အုပ်စုများ အခြေစိုက်ထားသော ရေးတပ်အုပ်စုများအား ပေါ်ပေါ်တင်တင် လူပါးဝစွာ ဖြတ်သန်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရန်မှာ ဖြစ်တန်ရာမ၇ှိချေ။ တရုတ်တို့ အနေဖြင့် တောင်အာရှဒေသ ရေလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်သော မလ္လကာ စရိတ် ရေကြောလမ်းမကြီးအား သမာရိုးကျ အသုံးပြုရန်မှာ ဖြစ်တန်ရာ မရှိသည့်အပြင် အန္တရယ်များပြားပြီး ခရီးရှည် ရက်များစွာ ဖြတ်သန်း မောင်းနှင်နေရမည်ဖြစ်သည့် တရုတ်၏ မွေးကင်းစ ရေတပ်မတော်အား ချိနဲ့စေနိုင်ကြောင်း တိုင်းတာ တွက်ချက်ခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံးတွင် မြန်မာပြည်မှ ငတုံးများအား စည်းရုံးကာ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းဒေသ ကူမင်းမြို့မှ မြန်မာပြည် အနောက်ဘက်ဒေသ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဓရာသို့ တိုးယိုပေါက်သော ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့အား လျှိ့ဝှက် တိုင်းတာ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရ၏။
ယခု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းအဖို့ အသက်ငင်မလောက်အောင်ပင် အသဲသန် ဖြစ်လာလေသည်မှာ ချောမော့ ချွေသိပ် အချိန်ဆွဲရေးအတွက် လွှတ်တော်ထဲသို့ ရောက်၇ှိလာအောင် လူထုထောက်ခံနေသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အား မက်လုံး ဖိန့်လုံးများ အမျိုးပေးကာ ဆွဲဆောင် သွတ်သွင်း လာသော အကြောင်းအခြေနေမှ ယခုအခါ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ၄င်း၏ ကတိအတိုင်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အားပြန်လည်ပြင်ဆင်ကာ သမ္မတရာထူးထိ တက်လှမ်းလာရန် လွှတ်တော်ပြင်ပ လူထုနိုင်ငံရေး ကွင်းပြင်သို့ ခြေလှမ်းသွက်သွက် လှမ်းထွက်လာခဲ့ရာမှ နောက်ဆုံးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းတို့၏ အာဏာရှင်ကြီးမှ ချပေးထားသောပုံသေကားချပ် နည်းဗျူအရ တရုတ်တို့၏ ဖိအား ထောက်အား ခိုင်မာခိုင်မာမာဖြင့် အများပြည်သူ သဘောမတူသော အစိုးရမှ ခွေးကျ ကျသကဲ့ ပြုတ်ကျလာမည်ကို မြင်လာခြင်းကြောင့် တရုတ်ပြည်သို့ အများအာရုံစိုက်မှုလွတ်ကင်းနေသော ကာလဖြစ်သည့် ယခု ၂၀၁၄ ခု သင်္ကြန်အခါသမယတွင် ကြေငြာခြင်းမရှိပဲ လျှို့ဝှက် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး လစ်ထွက်သွားက ပို၍ခိုင်မာ သော တရုတ်ပြည်မူဝါဒအား အကောင်ထည်ဖေါ်ပေးရေးနှင့် ကြံ့ဖွတ်တို့၏ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးနှင့် အာဏာ ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရေး ကျောထောက်နောက်ခံ တောက်တင်းခိုင်မာသည်ထက် ခိုင်မာလာစေရန် နိုင်ငံတော်၏ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးတွင် တင်ပြခြင်း အစီရင်ခံခြင်း မရှိသော ကျွန်ခံရေး စာချွန်လွှာ (၆) ခုအား မိမိသဘောဖြင့် မိမိ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းပါ……….
ပို၍လေ့လာလိုပါလျင် အောက်တွင် ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါသည်
China Offers $20 Billion High-Speed Rail to Myanmar
A $20 billion high-speed railway project to connect the coastal town of Kyaukphyu, Rakhine State, Myanmar with Kunming, South China, is at proposal stage, according toaMyanmar government sources.
An official from the Myanmar Ministry of Rail Transportation, who requested not to be named, told the news service "11" in Myanmar that China will fully fund the project, providing easy access to the Indian Ocean trade routes through an 800-km high-speed railway network. It will also provideatie to the work the Indian Government is doing on the port in that region.
The official stated, "We will only accept this if it offers opportunities for the country, and everyone — the public, the government, and the parliament — agreed to it." Myanmar has been under tremendous Western pressure to re-buff Chinese overtures for joint development, often under the guise of human rights and environmental concerns.
"We are still at the negotiation stage for the railway project at the moment. As we are still negotiating about it, nothing is definite. China has submitted the proposal, but [the project] can only be continued with approval from this side," said the official.
China plans to build and operate the railway and eventually hand it back to Myanmar after 50 years. High-speed trains will carry up to 4,000 tons of goods running at speeds of up to 170 km per hour, according toareport from Arakan Oil Watch,arather ratty green NGO.
ဆက်လက်၍ အသေးစိတ်များအား ဒုတိယ နိဂုံးပိုင်းတွင် တင်ပြပေးပါမည်
ရွှေမန်း နောက်မီး လင်းနေပြီ အပိုင်း(၂) နိဂုံးပိုင်း
မြန်မာပြည်က အစိုးရအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တော်တော် များများမှာ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ အတွင်းထဲထိအောင်သို့ပင် စိမ့်ဝင်ပြန့်နှံ့နေသော ရောဂါမှာ အကြောက်တရားနှင့် မယုံသင်္ကာမကင်း ဖြစ်နေသော လက္ခဏာ ရှိနေလေသည်။ ယခု အထင်ရှားဆုံးထောက်ပြရသော် ဦးရွှေမန်း၏ တရုတ်ပြည်သို့ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ရုတ်တရက် ကိုယ်ယောင်ဖြောင့် လစ်သွားသော ခရီးစဉ်က အလွန်ထင်ရှားကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း ထိုကာလ (သင်္ကြန်ရက်) များတွင်းမှာပင် ဂျာမဏီနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေ၏။ သူမသည် ဂျာမဏီသို့ မထွက်ခွါမှီ ရက်သတ္တ နှစ်ပတ်ကြိုတင်၍ သူမ၏ ဂျာမဏီခရီးစဉ်အား အတိလင်း ထုတ်ဖေါ်ကြေငြာပြီးသားဖြစ်သည့်အပြင် ပြောင်ပြောင်လင်းလင်းပင် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ လိုက်ပို့သူ ပြီးတော့ သူမ ပြန်လာသောအခါ လာရောက်ဆီးကြိုကြသူများနှင့် မယုံသင်ကာ ဖြစ်ခြင်း အရှင်းမရှိပဲ ပွင့်လင်းလေ၏။
လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီး ဦး သူရ ရွှေမန်းခရီးစဉ်မှာ ရှားလော့ဟုမ်းတောင်ပင် မသိလိုက်အောင် သိုသိပ်လွန်းလှသော်လည်း စာရေးသူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ “ကျမ ဦးရွှေမန်းကို ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု အတိလင်း လွှတ်တော်၏ နောက်ဆုံးနေ့ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အိပ်သွန်ဖာမှောက် ပြောဆိုခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါ လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီးအား ခြေရာခံ ရေဆုံးမြေဆုံး လိုက်လံစောင့်ကြည့်၇န်အသဲသန် အစီစဉ်များချခဲ့ကာ ရှားလော့ဟုမ်းပေါင်းများစွာဖြင့် မွေနှောက်ရှာဖွေလေသော အခါ တရုတ်ပြည်သို့ ၄င်း၏ ကလိမ်ကကျစ် ကြောင်လိမ်ရစ်သို့ လှည့်ပတ်ထွက်ခဲ့သော ခရီးစဉ်အား ချေရာကောက်မိခဲ့ရသည်။
တရုတ်ပြည်အစိုးရမှ မြန်မာပြည်၏ အစိုးရအဖွဲ့စည်းဝင်များနှင့် အတိုက်ခံ အဖွဲ့စည်းများအား ခိုင်မာသော မူ (၂) ရပ်ဖြင့် ခွဲခြားကာ ကွဲပြားစွာဆက်ဆံကြောင်း သိရသည်။ အကြောင်းမှာ အာဏာရူးကြီး ဦးသန်းရွှေအား အခိုင်မာကျားကန်ပေးကာ မသာအိမ်တွင် ဖဲဝိုင်ထောင်ရန် ငွေအလုံးရင်းဖြင့် ၀င်ကစားခွင့် ချယ်လှယ်ခွင့် လွှမ်းမိုးခွင့်များအား တရုတ်ပြည်အစိုးရမှ လက်ဦးစွာ ရယူခဲ့သည်ကို စာဖတ်သူများ ငြင်းကွယ်နိုင်မည် မထင်ပါ.. ယခုတဖန် တရုတ်တို့နှင့် ဆက်လက် ခိုင်မာစွာ လက်တွဲကာ တိုင်းပြည်အတွင်းတရုတ်အားကိုးဖြင့် ဆက်လက် မိုက်မဲလာသော ကြံဖွတ်အစိုးရနှင့် ၄င်းအစိုးရ၏ ကျောရိုးအမာခံ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အပြင် လက်ရှိ အာဏာရှင်ဆေးခါးသောက်ထားသူများဖြစ်ကြသော ကြပ်ပြေးမှ စစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် ထိပ်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆာင်များ၏ အနာဂတ်တ၀မ်းတခါးနှင့် ဘ၀ လုံခြုံသာယာရေး အလုံးစုံတို့အားတရုတ်ပြည်အစိုးရမှပင် အခိုင်မာ ဆက်လက် တာဝန်ယူထားပေးကြောင်းအပြင် မြန်မာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတို့ တရုတ်ပြည်သို့ သွားရောက်လေတိုင်း တ၇ုတ်ပြည်အစိုးရအား ကျေးဇူးရှင်ကြီးသဖွယ်အနေဖြင့် ၄င်းတို့မှ ဆက်ဆံလေ့၇ှိကြောင်း ကြပ်ပြေး နေပြည်တော်မှ အကြီးတန်းအရာ၇ှိတဦးက စာရေးသူအား အသေးစိပ်နီးပါး ပြောပြဘူးလေသည်။
ယနေ့တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် မြန်မာပြည် ကြံ့ဖွတ်ပါတီတို့မှာ ညီနှောင်ပါတီများဖြစ်ကြကြောင်းအား တရုတ်ပြည်ထုတ် အချို့သော သတင်းစာစောင်များတွင် ခေါင်စဉ်တပ် ရေးသာလာနေကြပြီး ပီကင်းမှ ထုတ်ဝေကာ အကြီးတန်း ပါတီဝင်များထံသို့သော ပို့ပေးလေ့ရှိသော ပါတီလမ်းစဉ် ဂျာနယ်တွင် အတိလင်းပင် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ထုတ် စာစောင်စဉ်အမှတ် ၅၀၈ ၏ စာမျုက်နှာ ၄၄ တွင် ရေးသားဖေါ်ပြလာလေသည်။
သို့သော် မြန်မာပြည်၏ အတိုက်ခံ ပါတီဟု ဆိုရမလောက်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဥာဏ်ဝင်း ဦးဆောင်၍ တရုတ်ပြည်သို့ 2013 ခုနှစ်တွင် လေ့လာရေး အနေဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ဘူးလေသည်။ ထိုအခါက တရုတ်ပြည်အစိုးရ၏ သတင်းစာဖြစ်သော ဆောက်ချိုင်းနား မောနင်း ပိုစ့်တွင် အန်အယ်ဒီနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့မှာ မဟာမိတ် ပါတီများ အဆင့်သို့ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖေါ်ပြကာ ပျားရည်နှင့် တေထားသော ၀မ်းနုတ်ဆေးလုံးလေးများအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အလည်ပတ်ရောက်လာသော အဖွဲ့အား တိုက်ကြွေးခဲ့သေးသည်။ အဆိုပါ တရုတ်ပြည်သူ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကြီး၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှ သတင်းစာအချို့မှလည်း ထိုသို့ပင် ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ရေးခြဲ့ကသည်မှာ မြန်မာပြည်၏ အကြီးဆုံးနှင့် လူထုထောက်ခံမှုရှိဆုံးသော ဒီချုပ် ပါတီမှ တရုတ်ပြည်၏ အကျိုးစီးပွါးများအပေါ် မြန်မာပြည်တွင်းဝယ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် တိုက်ခိုက်လာမည်ကို တရုတ်တို့ဘက်က စိုးရိမ်ကြောင်းကျ ခဲ့သည်မှာ မြင်သာလွန်းပါသည်။
ယခုဝယ် တရုတ်နှင့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဥက္ကဌကြီး ရွှေမန်းတို့ အကွက် ရွှေမှုများက မျက်စေ့မလည်သွားအောင် အတော်ပင် သတိထားလိုက်ကြည့်နေရလေသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းမှ တရုတ်ပြည်တွင် အသဲသန် ညှိနိုင်းခဲ့သော အကြောင်းချင်းရာများတွင် ကျောက်ဖြူကူမင်း ရထားလမ်းအကောင်ထည်ဖေါ် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် တရုတ်ပြည်ဘက်သို့ ကျောမှီ ထားသော မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ကိစ္စတို့မှ အထူး အဓိက ကျလွန်းလေသည်။ တရုတ်တို့အနေဖြင့် ကချင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့စည်းအား မလိုလားသည်မှာ အထင်ရှားဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိ တရုတ်ပြည် ယူနန် အရှေ့ခြမ်းတွင် ကချင် ရှမ်းနှင့် ပလောင် တိုင်းရင်းသားတို့၏ နေထိုင်အတည်တကျ ဖြစ်နေမှုမှာ လူဦးရေ ၃ သိန်းကျော်မျှ ဖြစ်နေပြီး အဆိုပါ လူဦးရေအားလုံးတို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံသားများအဖြစ် တရားဝင် တည်ရှိနေရကာ တရုတ်ပြည်မှ တိုင်းရင်းသားတို့၏ အခွင့်အာဏာ ကိစ္စအတွက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေကြသော ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးအား မြန်မာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီအား ရှင်းလင်းဖယ်ရှားသကဲ့သို့ လွယ်ကူလေမည် မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်ပြည်အစိုးရမှ တပ်အပ်သိလေသည်။ သို့ကြောင် ချောက်တလှည့် ချော့တလှည့်ဖြင့် ကချင် နှင့် အခြားသော လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအား ဖိအားပေးနေသည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကျော်မျှလောက်ကပင် အတိလင်း ဖြစ်လာလေသည် ဟု နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာတွင် ရေးသားဖေါ်ပြထားလေသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တွင်ထုတ်ဝေသောhttp://thediplomat.com/2014/04/washingtons-flawed-myanmar-policy/ဒီပလိုမက် သတင်းစာစောင်တွင် တရုတ်ပြည် အစိုးရမှ လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်း ဆောင်ရွက်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများအတွင် ၀င်ရောက် ကျားကန် အကူညီပေးလာခြင်းကို လုံးဝလိုလားမှု မရှိသောကြောင့် ယနေ့ ကချင် လက်နက်ကိုင်များအဖို့ အမေရိကန် အပါဝင် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အထူးတလည် သတိထားကာ ဆက်ဆံနေရကြောင်း ကေအိုင်အေ တပ်မှူးတယောက်မှ အတိလင်း ရင်ဖွင့်ထားသည်ကို ဖေါ်ပြထားလေသည်။
သိုသော် လွန်ခဲ့သော ဧပြီလ တတိတ အပတ်တွင်းကပင် ကချင် လူမှုအကူညီပေးနေသော အဖွဲ့ အချို့နှင့် ကေအိုင်အေ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်အား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုစေခဲ့ပြီး အမေရိကန် အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဌာနနှင့် နယူးယောက် မြန်မာ့အရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိများ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းကို အမေရိကန်သတင်းများတွင် ထဲထဲဝင့်ဝင့် ဖေါ်ပြလာသည်မှာ တရုတ်အစိုးရ၏ တဖက်သတ်လက်ကိုင်ဒုတ်လုပ်လာသော မြန်မာအစိုးရအပေါ် အမေရိကန်မှ စေ့စေ့စပ်စပ် စောင့်ကြည့်လာကြောင်းနှင့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များနှင့်လည်း အမေရိကန် အရာရှိများ ထိစပ်နေကြာင်းအား ပြသခဲ့သော သဘောကို ဆောင်နှင်းပြကာ ဧပြီလ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် အမေရိကန်သမ္မတကြီး အိုဘားမား၏ အာရှခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်ပြည်အနေဖြင့် ရုရှားတို့ ယနေ့ ပြုလုပ်လာသော ခရိုင်မီးယား အရေးကဲ့သို့ အာရှတွင် မပြုလုပ်ရန် သတိပေးသော မိန့်ခွန်းများ ပြောဆိုခဲ့လေ၏။
သို့သော် မြန်မာ ကြပ်ပြေး အစိုးရ၏ ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ဥက္ကဌကြီး ရွှေမန်းမှာ ယခု မေလ (၁)နေ့ကပင် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ သုတ်ခြေတင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ခရိုင်ပြည်နယ်အတွင် သိမ်းယူခြင်းခံထားရသော လယ်ယာမြေအားလုံးအား ပြန်ပေးမည်ဟု နုတ်ကတိဖြင့် ရခိုင်ရပ်မိရပ်ဖများအား ပျာရည်နှင့် ၀မ်းချခဲ့လေသည်မှာ ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဂျွန်လတွင် အကောင်ထည်ဖေါ်တော့မည်ဖြစ်သော အိန္ဒိယ သမုဒ္ဓရာ ဒေသတခုလုံးသို့ တိုးရိုပေါက် အမြန်ဝင်ရောက် လွှမ်းမိုးနိုင်သော တရုတ်တို့၏ ကျောက်ဖြူ ကူမင်း ရထားလမ်း စီမံကိန်းအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဒေသခံများ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာပြီး ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင် ကြမည်ကို ဦးရွှေမန်းနှင့် တရုတ်ပြည် အစိုးရတို့ ကောင်းကောင်း တွက်ချက်ထားကြောင်း သိသာလေသည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယမှ လုပ်ငန်းရှင်များအားလည်း အာရှလမ်းမကြီးအား အိန္ဒိယ နိုင်ငံအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ဖေါက်လုပ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ အစိုးရအား လှည့်စားသော မာယာကျားကွက်များကိုလည်း တွေ့ရပြန်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလတွင် စတင် စမ်းသပ် ပို့လွှတ်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်မှ ကူမင်းသို့ သွယ်တန်းထားသည့် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးသော တရုတ်ဂစ်ပိုက်လိုင်းမှ ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ ၂.၄ ဘီလီယံ လီတာ ပို့လွှတ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် တရုတ်တို့၏ လောဘမှာ ရခိုင်ဒေသသို့ ဆထက်တံပိုး ကြီးထွားလာနေကြောင်း စင်္ကာပူတွင် ထုတ်ဝေသည့် အေးရှ တိုင်းမ် သတင်းစာတွင် ရေးသားဖေါ်ပြထားလေသည်။
မည်သို့ပင် ဆိုကြစေကာမူ လက်ရှိကြပ်ပြေး နေပြည်တော်အစိုးရနှင့် ၄င်း၏ ကြံ့ဖွတ်ပါတီမှ တရုတ်ပြည်မကြီး၏ ဘဏ်တခုတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၄ သန်း တိတိ ၀င်ရောက်အပ်နှံကာ တရုတ်အစိုးရနှင့် ထပ်မံပူးပေါင်းပြီး မြန်မာပြည်ဘက်သို့ အဆိုပါ ကြံ့ဖွတ်ပါတီမှ အပ်နှံထားသော တိုက်ရာပါ ခိုးရာပါ စာရင်းဖြောက်ထားသည့် ပြည်သူ့ငွေများဖြင့် တရုတ်ကုမ္မဏီ အသွင် ဟန်ဆောင်ကာ ပြန်လည်ရင်းနှီး မြှုပ် နှံမှုများ ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်လုပ်ငန်း အသင်းဝင် အထက်အရာ၇ှိကြီးတဦးမှ စာရေးသူအား လွန်ခဲ့သော တစ်လက ပင် ခိုင်ခိုင်မာမာ သက်သေခံ အချက်လက်များ ပေးပို့ခဲ့လေသည်။
သို့ကြောင့် လက်ရှိ အစိုးရ၏ ဘက်မလိုက်မူဝါဒနှင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွါးရေး ကုန်သွယ်ရေးတို့တွင် အားလုံးနှင့် ချစ်ကြည်မျှတစွာ ဆောင်ရွက်နေပါသည်ဟု ဖိန့်လုံးကြီးများ တွင်တွင်သွန်းလောင်းနေစေကာမူ အများပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရအပါဝင် အချို့ဖြောင့်မတ်မျှတသော အနောက်နိုင်ငံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်ကြီးများ မသိသေးသော အချက်မှာ မြန်မာပြည်အတွင်း၇ှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဲ့ကိုင် ခေါင်းကိုင်များမှ အစပြု၍ မြန်မာ့ ကြပ်ပြေး အစိုးရ တဖွဲ့လုံးကတော့ဖြင့် တရုတ်ပြည်နှင့်သာ အနာဂတ်တွင် နောက်မီးလင်း စီးပွါားရေးစနစ်တခု နိုင်ငံရေးဗျူဟာနှင့် စစ်ရေး အခင်းကျင်း များအား အဆင်ချင်မဲ့စွာ လျှို့ဝှက်၍တမျိုး ပုန်းကွယ်၍တဖုံ ဆောင်၇ွက်နေလျက် ၇ှိကြောင်းပါ……………..
တင်ပြခဲ့သော သတင်းဆောင်းပါးပါ အချက်လက်များ မှန်ကန်ကြောင်းအား တာဝန်ယူပါသည်
စာဖတ်သူများအား အထူးကျေးဇူး တင်လျှက်ပါ
(ဧရာဝတီ) သူရိယ အလင်း ဂျာနယ်တိုက် ကို ဝင်ရောက်သိမ်းဆည်းမှုမှာ ပါတယ် ဆိုပြီး သတင်း ထွက်ပြီးနောက် ကိုနေရွှေသွေးအောင် ခေါ် ဖိုးလပြည့်ကို အဖို...
(Minmaha Baga FB Page) ခင်ဗျား ဘာတတ်သလဲ? ဆရာဝန်လား? အင်၈ျင်နီယာလား? ပရောဖက်ဆာလား? အန်ဂျီအိုလား? ခင်ဗျားတတ်တာတွေ အကုန်လုံး တိုင်းပြည်ရ...